10 / 12 / 2014 Xaraashyada, GUUD, HAY'ADAHA, MALAALADAHA MUHIIM AH, Headline, Jadwalka Nidaamka Tareenka, TURKEY, TCDD
Qodobka Daahfurka 1 Nalalka Nolosha (189.956.000 litir SCT, 185.000.000 litir naaftadda SCT-free), kaas oo looga baahan yahay ururkeena baahida sanadlaha ah ee 4.956.000, waa in la soo iibiyaa iyadoo la raacayo 4734 Qodobka 19 ee Sharciga Wax soo iibsiga Dadweynaha. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan hindisada hoos ku qoran:
Lambarka Diiwangelinta Dukumiintiga: 2014 / 137067
b) Telefoonka iyo lambarka fakska: 3123243399 - 3123115305
Kırıkkale: Saliidda Nuclearka ee 90.000.000 Izmit / Körfez: 5.956.000 litir naaftada Mersin: 50.000.000 litir dherer Dörtyol / Iskenderun: 44.000.000 litir naaftada
b) Goobaha Bixinta: Ka dib marka la saxiixo heshiiska, 3 waxaa la bilaabi doonaa maalinta gudaheeda, 1 waxaa la gaari doonaa sanadka oo dhan: Kırıkkale; litir 90.000.000 (otv'l oo naafto ah, cab la baabuur a) Izmit / Gulf: litir 5.956.000 (5.000.000 otv'l litir oo 956.000 waajib canshuuraha litir on markab naaftada gaari-cab la baabuur a) Mersin: litir 50.000.000 (SCT 's shidaalka naaftada la baabuur cab) Dortyol / Iskenderun: litir 44.000.000 (40.000.000 canshuuraha litir waajib 'la 4.000.000 waajib canshuuraha' naaftada ugu horeysay, iyadoo baabuur cab) tan iyo markii shaqada laga bilaabo meelaha tilmaamay in liiska dalagga faahfaahinta hal sano, naaftada waqtiyo ku qeexan iyo tiro, TCDD "in la geeyo
c) Taariikhda bixinta: Kırıkkale; Xaafad Dhererka Nadiifka ah (Saliidda Naaftada OTV), ISTANBUL / DERİNCE; Saliidda Dhererka (OTV), Saldhigga Tareenka (Istanbul Derince wuxuu furi doonaa wadada u dhexeysa cidhifka cisterna) Qalabka 90.000.000 5.000.000 (SCT bilaash, booyad) Qalabka farsamada 2.2 Mersin: 956.000 Litiraad (oo leh shidaalka shidaalka ee SCT) Doolyiin: 2.2 SCT oo leh 50.000.000 SCT bilaash ah, baabuur caan ah) shidaalka naaftada ah waa in lagu wareejiyaa TCDD mudo hal sano ah laga bilaabo taariikhda lagu qeexay liiska ku xusan qodobka Faahfaahinta farsamda, waqtiyada loo cayimay iyo tiro ahaan.
a) Goobta: Agaasimaha Guud ee Qaybaha Maareynta, Hoolka Shirarka (qolka 4030) Talatpasa Bulvarı Station / ANKARA
b) Taariikh iyo waqti: 12.01.2015 - 10: 00
Xayeysiinta Qandaraaska ah ee aan ku daabacnay boggayaga ayaa ah ujeedo macluumaad ah oo aan bedelin dukumiintiga asalka ah.
Maanta taariikhda: 10 December 1928 Dalbashada Tareenada Anatolian ee u dhexeeya dawladda iyo shirkadda maanta
Ogeysiiska Qaadashada: Maqaalka Maqaalka ee Iibiya